I-Fisher Mountain Hut - I-Airbnb
I-Fisher Mountain Hut
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguAnna
Le ndlu yeentaba i-RUSTIC yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka entabeni! Ukufikelela ebusika kufuna iimayile ezi-5 zokutyibilika ekhephini. Yimizuzu engama-20 yokuqhuba ukuya kwindawo yeqonga ukusuka eCreede. Kwiinyawo ezili-11,000, imisebenzi yangaphandle iyanda unyaka wonke. Indlu yimizuzu engama-30 yokuqhuba ehlotyeni kwaye ungaqhuba ukuya kwiinyawo ezingama-400. AKUKHO manzi abalekayo. Inkonzo yendlu yangaphandle. Kukho oomatrasi kodwa AKUKHO nto zokulala ezibonelelweyo. Kufuneka uze namanzi akho kunye nezinto zokulala. Akukho ntlawulo yokucoca. Kusenokubakho ubungqina beempuku.
I-Hut yethu ikwiiNtaba zeSan Juan ezantsi kweFisher Mountain kwi-11,000 yeenyawo. Inomgangatho omkhulu wokonwabela iimbono ezintle zentlambo engezantsi kunye neefestile ezinkulu ukuze naxa ungaphakathi, uzive ngathi ungaphandle. Uya kufumana le yeyona ndawo igqibeleleyo yokuphumla kunye nokuvuselela. Gcina ukhumbula ukuba AKUKHO manzi abalekayo (ebusika) okanye umbane. Kukho isitovu sepropane sokupheka kodwa akukho sikhenkcisi. Kuya kufuneka uze neengxowa zokulala ukuze ulale kunye namanzi akho. Kukho indlu yangaphandle malunga neenyawo ezili-100 ukusuka kwindlu.
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2
4.83 · Izimvo eziyi-69
Iintaba zeSan Juan yindawo yokudlala ebonakalayo. Kukho iindlela ze-4wd kuyo yonke indawo kunye neendlela zomzila omnye onokuzonwabela. Kukho i-skiing enkulu yabatyibilizi bawo onke amanqanaba phezulu nasemva kwendlu. Idolophu yaseCreede, imizuzu engama-20 kude, ineendawo zokutyela ezintle, iivenkile kunye neegalari zobugcisa kunye namathuba okuzonwabisa. Yidolophu endala enemigodi kwaye inemyuziyam yemigodi ephantsi komhlaba kunye nethiyetha eyaziwayo yehlabathi enemiboniso lonke ixesha lasehlotyeni.
I live on the land of enchantment, New Mexico. I love to travel, spend time with my family, meet new people, snowboarding, and learn languages. I'm a PhD student and a teacher assistant at the University of New Mexico.
Iilwimi: 中文 (简体), English, Русский, Español